ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားအပေါင်းကို ရက်ရက်စက်စက် ချက်ကောင်းချိန်ပစ်သတ်ခဲ့တုန်းက မင်းတို့ သနားတယ် တခွန်း ပြောခဲ့ဖူးသလား …။ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “ဖုန်ကြားရှင်” Pheung Kya-shin
My point to point rebuttal to Hmuu Zaw’s pathetic cry about the people’s hatred on military »
ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားအပေါင်းကို ရက်ရက်စက်စက် ချက်ကောင်းချိန်ပစ်သတ်ခဲ့တုန်းက မင်းတို့ သနားတယ် တခွန်း ပြောခဲ့ဖူးသလား …။
၈၈ လောက်ကပဲ စပြောပါ့မယ် …
“ သေနတ်ဆိုတာ မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူးကွ ” ဆိုပြီး လက်နက်ဆိုလို့ သွားကြားထိုးတံတောင် မပါတဲ့
ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားအပေါင်းကို ရက်ရက်စက်စက် ချက်ကောင်းချိန်ပစ်သတ်ခဲ့တုန်းက မင်းတို့ သနားတယ်
တခွန်း ပြောခဲ့ဖူးသလား …။
ပစ်သတ်တာလည်း မင်းတို့ အာဏာရှင် လက်ကိုင်တုတ် စစ်တပ်ပါပဲ …။
စိန်လွင် ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာတောင် သားသတ်သမား ဆိုပြီး ကျော်ကြားသွားတဲ့အထိ … ဘယ်လောက်ရက်စက်ရိုင်းစိုင်း
ခဲ့သလဲ … စာနာတဲ့ စိတ် ၀င်မိခဲ့ဖူးသလား …။
ဒါလည်း မင်းတို့ စစ်တပ်က ပစ်သတ်ခဲ့တာပဲ …။
ရွှေဝါရောင်မှာ ဘုရားသားတော်တွေကို မီးသင်္ဃန်းကပ်
တာတွေ … ဆန္ဒပြလူထုကို ရော်ဘာကျည်ဆိုပြီး ကျည်အစစ်နဲ့
ပစ်သတ်ခဲ့တာတွေ … သေနတ်ချင်းယှဉ်ပစ်ရတဲ့ တိုက်ပွဲ
မဟုတ်ခဲ့ဘူးနော် … မင်းတို့ ဂရုဏာတရား နှမ်းတစေ့
ထားခဲ့ဖူးသလား … အထက်အမိန့်ဆိုတိုင်း …
“ ဟေ့ကောင်တွေ ချီးစားစမ်းကွာ ” ဆိုရင် … မင်းတို့
စားမလား …။ လူ တင်ပါလို့ ကျားကိုက်တာပါ ကွာ …။
ပြောရရင် ဦးနှောက်ဆေး ရိုက်သွင်းထားတဲ့ အသိဥာဏ်
သေးသေးလေးနဲ့ ပြည်သူကို ကျွန်သဘောက်လို သဘောထား
တန်ဖိုးမထား … မင်းတို့ သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ ဆိုတာ
အခု စစ်ပွဲတွေထက် အဆ ရာချီ ကျော်ပါတယ် ကွာ …။
ခုကျတော့မှ … ကိုယ့် ရွေးချယ်မှုကို မပြောဘဲ …
“ ငါတို့က တိုင်းပြည်ကို အသက်ပေးပြီး ကာကွယ်နေကြတာ ” လို့
အသံကောင်း မဟစ်ပါနဲ့ …။ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ၊ ခိုးစားဝှက်စားတွေ
ရနေတုန်းကတော့ သောက်သံတစက်မထွက်ဘူး …။
မျက်ရည်လည်း မချူနဲ့ … မရဘူး ။
မသနားလို့ ၊ မစာနာလို့ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး …။
လူသေတာကို ၀မ်းသာတဲ့ အထဲမှာလည်း မပါဘူး …။
ဘယ်လူသားမှ သေဆုံးရတာကို မလိုလား ဘူး …။
ဒါပေမယ့် မင်းတို့လေသံနဲ့ ပြောပုံဆိုပုံတွေ အရ …
သောက်ညင်ကပ်လာပြီ … အေး ပြောလိုက်ဦးမယ် …။
ငါ တောင်းဆိုတယ် …။
This entry was posted on February 12, 2015 at 1:55 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားအပေါင်းကို ရက်ရက်စက်စက် ချက်ကောင်းချိန်ပစ်သတ်ခဲ့တုန်းက မင်းတို့ သနားတယ် တခွန်း ပြောခဲ့ဖူးသလား …။”
Myo Than Kywe shared BBC Burmese’s post.
လောက်ကိုင်မှာ လက်ရှိစစ်ဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဘာလဲ?
၁။ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ သစ်ခိုးထုတ်တာကို တရားဝင်ဖမ်းထားပြီး ပြန်မလွတ်ပေးတာကို တရုတ်စစ်သား ၅၀၀၀တော်နဲ့ မြန်မာပြည်လာတိုက်ပြီး အသေခံရလောက်အောင် ဖမ်းထားတဲ့ တရုတ်စစ်ခိုးသမား ဆယ်ဂဏန်း အရေအတွက်က တော်၂ အရေးပါနေလို့လား?
၂။ ဘိန်းစိုက်ခင်းတွေ အရမ်းများပြီး ဘိန်းကိုမြန်မာ့မြေပေါ်မှ ပပျောက်စေချင်လို့ တိုက်ပွဲဖြစ်တာလား
မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘိန်းစိုက်နေ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းကပါ။ အစိုးရ သိသိကြီးနဲ့ လွတ်ပေးပြီး ဘိန်းဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ ဝင်ငွေတစ်ရပ်ပါ။
ဒါဆိုဘာကြောင့်လဲ ကျွန်တော်ပြောရဲတာ တစ်ခုတည်း ရှိပါတယ်။
လောက်ကိုင်မှာ စစ်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကြောင့်ပါ။
၁။ စစ်တပ်မှာ တစ်နှစ်တစ်နှစ် ခေါ်ယူတဲ့ ဗိုလ်အရေအတွက် နဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာ စုဆောင်းထားတဲ့ စစ်သားအရေအတွက်က အရမ်းများနေတယ်။ စစ်မဖြစ်ဘဲ စစ်သားနဲ့ ဗိုလ်အရမ်း
၂။ ရွေးကော်ပွဲ မတိုင်မိ စစ်တပ်မရှိရင် တိုင်းပြည်ပျက်သွားထင်အောင် ဇာတ်ညွှန်းကောင်းကောင်း တစ်ပုဒ် ရေးလိုက်တယ်။
၃။ စစ်တုရင်အခေါ် ပွန်းတွေထုတ်ကျွေးပြီး အာဏာထိန်းသိမ်းရန် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ စစ်မဖြစ်ဘဲ ပိုလျံနေတဲ့ အောက်ခြေစစ်သားတွေကို ထုတ်ကျွေးလိုက်တယ်။ ဇာတ်နာအောင်လုပ် သနားလာအောင်လုပ် သေသွားတဲ့ စစ်သားပုံ ဗိုလ်ပုံတွေကို နိုင်ငံ့သတင်းစာမှာ ဝေဝေဆာဆာတင်။ သူရဲကောင်းစစ်သည် သူရစွမ်းရည်နဲ့ ပြည့်စုံသော တမ်မတော် ဘာညာသာရကာ ချီးမွမ်းခန်း ဖွင့်။ တရားသောစစ် ဘာညာနဲ့။
မှတ်ချက်။ သေသွားသော သူပုန်မိသားစုနဲ့ အကြောင်း မပြောရ။ စစ်ဖြစ်တာ မကောင်းဘူးလို့ ထင်သွားစိုးလို့။
အော် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်မရှိရင် မဖြစ်တော့ဘူးလို့ ပြည်သူတွေကထင်။ ရွေးကော်ပွဲမှာ ကြံ့ဖွတ်ပါတီရ။ တစ်ချက်ခုတ် သုံးချက်ပြတ်
Credit to : Dev Hda